Testosterone Cas 58-22-0 Qiimaha, Alaab-qeybiyaha ka socda Bolise
[CAS MAYA. ] 58-22-0
[Foomka Molecular] C19H28O2
[Miisaanka Molecular] 288.42
Ku saabsan testosterone
Hormoonkaas waa hormoonka galmada ee hormoonka ah iyo steroid dhiska ee ragga. Bini'aadamka labka ah, testosterone wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa horumarinta unugyada taranka ee ragga sida tijaabada iyo qanjirka 'prostate', iyo sidoo kale kor u qaadista astaamaha galmada labaad sida murqaha iyo lafaha oo kordhay koritaanka timaha jirka. Intaa waxaa dheer, testosterone labada jinsiba waxay ku lug leedahay caafimaadka iyo ladnaanta iyo kahortagga lafa-beelka. Heerarka aan ku filnayn ee testosterone ee ragga waxay u horseedi kartaa cillad aan caadi ahayn oo ay ku jiraan jilicsanaan iyo lafo beelid.